Croatia oo xuduudada xirtay - BBC News Somali
Croatia oo xuduudada xirtay
Dalka Kureyshiya ayaa xiray todobadda ka mid ah irdaha looga gudbo xuduudkiisa dalka Seerbiya, iyadoo uu dalku uu la tacaalayo kumanyaal soogalooti iyo qaxooti isku dayaya in ay u gudbaan dalalka waqooyiga Yurub.
Wasaaradda Arrimaha Guddaha ayaa sheegay in wadooyinka aada xuduudada la xiray. Maxadada tareenka ee Tovarnik ee ku taalada xuduuda dalka Kureyshiya ay la wadaago dalka Seerbiya, ayaa boliiska rabshadahu waxay hareereeyay laba kun oo qof oo soogalooti ah oo halkaa ku sugan.
Magaaladda Zagreb ee caasumadda ah ayaa boqolaad soogalooti ah waxay isku dayayaan in ay gaaraan magaaladda Bregana ee ku taala xuduuda dalka Slovenia uu ka wadaaho galka Kureyshiya.
Qaar badan ayaa waxay galaya safar lug ah oo qaadanaya ilaa iyo lix saacadood. Nin masiixi ah oo u dhashay dalka Suuriya ayaa u sheegay BBCda in ay dadku lugeynayaan iyagoo aan seexan, sababtoo ah buu yiri, waqti looma hayo hurdo...'Maalin walba xeerarka ayaa isbedelaya.'